Maharikoriko ahy sy ny fiainana miafina ny ozin'ireo biby fiompy | Sina maharikoriko ahy sy ny fiainana miafina ataon'ireo mpanamboatra biby, mpamatsy
Tavoahangy tsy misy fangarony 450ml CH-RB450
Tavoahangy tsy misy fangarony LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny famolavolana silicone, mety tsara ny mitazona azy; Raha vao manindry dia hisokatra; Miaraka amin'ny malamalama malama, dia mahatsapa aina; Miaraka amin'ny famolavolana lamina maroloko dia mahatsiaro ho lamaody sy tsara tarehy izy io.
Tavoahangy tsy misy fangarony 600ml CH-RB600
Tavoahangy tsy misy fangarony 360ml CH-RP360
Tavoahangy tsy misy fangarony LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny famolavolana fikirakirana roa tsy mitongilana, mety kokoa ny mitazona azy; Raha vao manindry dia hisokatra; Miaraka amin'ny malamalama malama, dia mahatsapa aina; Miaraka amin'ny famolavolana lamina maroloko dia mahatsiaro ho lamaody sy tsara tarehy izy io.
Tavoahangy vy misy mololo 360ml CH-RM360
Tavoahangy vita amin'ny vy tsy misy fangarony miaraka amina mololo, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny famolavolana fikirakirana indroa tsy mitongilana, mora ny mitazona azy, mety ho an'ny ankizy mianatra misotro; Miaraka amin'ny famolavolana modely 3D miloko dia mahatsapa lamaody sy tsara tarehy izy io.
Tavoahangy tsy misy fangarony 600ml CH-RO600
Tavoahangy tsy misy fangarony LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny famolavolana modely 3D miloko dia mahatsapa lamaody sy tsara tarehy izy io.
Tavoahangy vy tsy manify 600ml (L) CH-RH600
Tavoahangy tsy misy fangarony LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny famolavolana tady silikôla dia mety any ivelany izy io; Miaraka amin'ny malamalama malama, dia mahatsapa aina; Miaraka amin'ny famolavolana lamina maroloko dia mahatsiaro ho lamaody sy tsara tarehy izy io.
Tavoahangy tsy misy fangarony 300ml (S) CH-XO300
Tavoahangy tsy misy fangarony LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny malamalama malama, dia mahatsapa aina; Miaraka amin'ny famolavolana lamina maroloko dia mahatsiaro ho lamaody sy tsara tarehy izy io.
Tavoahangy tsy misy fangarony 360ml (L) CH-XO360
Tavoahangy tsy misy fangarony 300ml CH-XQ300
Tavoahangy tsy misy fangarony LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny famolavolana tady silika dia mety ny mitazona sy any ivelany; Miaraka amin'ny malamalama malama, dia mahatsapa aina; Miaraka amin'ny famolavolana lamina maroloko dia mahatsiaro ho lamaody sy tsara tarehy izy io.
Tavoahangy tsy misy fangarony 260ml CH-RN260
Tavoahangy tsy misy fangarony LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny famolavolana tahony roa sosona, mora ny mitazona azy; Miaraka amin'ny malamalama malama, dia mahatsapa aina; Miaraka amin'ny famolavolana lamina maroloko dia mahatsiaro ho lamaody sy tsara tarehy izy io.
Jar Vacuum Food 300ml CH-MF300
LONGSTAR vovo sakafo Jar, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, dia hanafana ny lasopy mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny malamalama malama, dia mahatsapa aina; Miaraka amin'ny famolavolana lamina maroloko dia mahatsiaro ho lamaody sy tsara tarehy izy io.
Tavoahangy vy misy mololo 450ml (S) CH-RH450
Tavoahangy vita amin'ny vy tsy misy fangarony miaraka amina mololo, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny haitao Vacuum, misoroka ny fihenan'ny hafanana, hafana mandritra ny fotoana maharitra; Miaraka amin'ny malamalama malama, dia mahatsapa aina; Miaraka amin'ny famolavolana lamina maroloko dia mahatsiaro ho lamaody sy tsara tarehy izy io.
123456 Manaraka> >> Pejy 1/20